“သုံးမိနစ်” လျှပ်စစ် ရေနွေး အိုး ပျက်ရင် ပစ်မထားနဲ့အခုလိုပြင်သုံးရင် အများကြီးသုံးလို့ရတယ် – Shwe Myanmar
Posted on January 29, 2021 January 29, 2021 by Shwe Myanmar
“သုံးမိနစ်” လျှပ်စစ် ရေနွေး အိုး ပျက်ရင် ပစ်မထားနဲ့အခုလိုပြင်သုံးရင် အများကြီးသုံးလို့ရတယ်
လူသုံးများနေတဲ့ ဖော်ပြပါ သုံးမိနစ် လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးတွေဟာ လပိုင်းနဲ့ ပျက်စီး ပြီး စက္ကူ အဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ အချိန်ဈေးနဲ့ လာရောင်းထားတာအများကြီးတွေ.နေရလို့ ပြုပြင် အသုံးချတဲ့နည်းကို ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ပြုပြင်ပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ သုံးနေတာ ၂ နှစ်နီးပါရှိနေပြီး ဖြစ်တယ် ၊မူလ အသစ်ထက် စိတ်ချစွာ အသုံပြုနိုင်တဲ့နည်းပါ။ ရေနွေးအိုး အများစု ဟာ power supply. ခေါ် လျှပ်စစ် ကို အောက်ဖက် အဝိုင်းနေရာက ကြွေးပါတယ် ၊
အဲ့ဒီနေရာ မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ terminal ကြေးပြားလေးတွေဟာ အလွန်ပါးပြီးအသုံးပြု တာ ကြာလာရင် အပူဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီး ကာ ငုတ် နှစ်ခုမထိ တော့ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်မစီးနိုင်ကာ ရေနွေး ကျိုမရဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရပါတယ်။
အဲသည်တော့ power supply ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်ထွင်ပြီး တပ်ပေးလိုက်ရင် အကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။(အိုးအများစုက အောက်ဖက် မီးအဝင်နေရာပျက်ကြလို့ပါ)၊ပိုပြီးသေချာခြင်ရင် AVO မီတာနဲ့ အောက်ဖက်က အပူပေးကွိုင်ကို ထောက်တိုင်းလို့ အချက်ပြရင် ကွိုင် ကောင်း တာပါဘဲ။
၁.ယိုးဒယား ကလာတဲ့ ဟင်းကြော်အိုး အနီတွေမှာ သုံးတဲ့ အခံဆော့ကက်ဂေါင်း (ကြွေခံဖြစ်ရပါမယ်)ကို လျှပ်စစ်ဆိုင်တွေမှာ 500/- နဲ့ ဝယ်ပါ။
၂.ရေနွေးအိုး အောက်ဖက် screw သုံးလုံးဖြုတ်ပြီးဖွင့်ပါ။ အလည် အဝိုင်းသို့ power supply ပေး သည့် ဝါယာစ နှစ်စ တွေ့ရပါမည် ။(အပြာနှင့် အနီ) ၊၎င်းအစ နှစ်ခုအား ဘဲနှုတ်သီး ပလာယာဖြင့် အသာဖြုတ်ပါ။
၃.ဝယ်လာသည့် ဆော့ကက်အထိုင် မှ ကြွေသား ပါသည့်အပိုင်းကို ယူပြီး ရေနွေးဘူး၏ အောက်ခြေတဖက်ခြမ်း ဝါယာကြိုး အလှမ်းမှီရာ နေရာတွင် နေရာချပါ။(အခြားဘက်တွင် အချက်ပြ မီး/pilot lamp)ရှိသည်။
၄. အောက်ခြေ အပေါက်ဖောက်ရာတွင် ဖောက်စက် မရှိပါက ဖော်ပြထားသလို သံချွန် /စကေဘာ ကို မီးအပူပေးပြီး ရေနွေးဘူးအောက်ခံ ကော်သားကို အပေါက်ဖောက် ယူပါ။
၅. ဆော့ကက်အထိုင် ကြွေခေါင်း တပ်ဆင်နေရာချရာတွင် လျှပ်စစ် ဝင်မည့်ငုတ် နှစ်ခု မထိအောင် စံနစ်တကျ နတ်ကြပ် ပေးပါ။(တဖက်ဖက်ကို ရာဘာ ပိုက်သေး စွပ်ပေးလျှင် ပိုပြီးစိတ်ချရပါသည်။
၆.၎င်းနောက် ပထမ ဖြုတ်ထားခဲ့သည့် ဝါယာ ၂ စကို အသစ်ထိုင်ထားသည့် ကြွေ ဆော့ကက်တွင် တပ်ဆင်ပေးပြီး အောက်ဘက်မှ screw သုံးလုံးကို စံနစ်တကျ ပြန်တပ် ပေးလျှင် ရေနွေးကြိုနိုင်သည့် အိုးအကောင်းတခု ရလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇.အသုံးပြု မည့် မီးကြိုးမှာ ယိုးဒယား ဟင်းကြော်အိုး အနီ တွင် အသုံပြုသည့် ကြိုးဖြစ်ပြီး အိမ်တွင် ရှိပါက ထပ်မံဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ ဝယ်လျှင် 1500/- ကျပ် ဝန်းကျင်ပေးရပါသည်။ အိုးအထိုင် အဟောင်း မှ ဝါယာများဖြုတ်ကာ အထိုင်ကို ပြန်ပြီး အသုံပြုနိုင်ပါသည်။
ဆော့ကက်အထိုင် မှာ ကြွေ ဖြစ်ရပါမည် ။ရေနွေး အိုးမှာ ဝပ် watt-900 ခန့်ဖြစ်လို့ အထိုင်တွေကို့ စံနစ်တကျ နတ်ကြပ် ရပါမည်။ မထိတထိ ဖြစ်ပါက လျှပ်စစ်spark များဖြစ်ကာ အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါခမျာ။ ရေနွေးအိုး က ဈေးပေါပါတယ်။
4500/-ဘဲ ပေးရတာပါ။ ပြင်သုံး ရင် ၂ နှစ် လှည့်မကြည့်ရပါဘူးဗျာ။ “သုံးမိနစ်” လျှပ်စစ် ရေနွေး အိုး ပျက်ရင် ပစ်မထားနဲ့အခုလိုပြင်သုံးရင် အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 8 (ယမန်နေ့က ကျနော် ပြုပြင်ပေးခဲ့သော အမျိုးတယောက်ရဲ့ ရေနွေးအိုး ပါ)
ဗဟုသုတ နှင့် ငွေကိုခြွေတာနိုင်စေရန် ရေးသားတင်ပြသည်။ “သုံးမိနစ်” လျှပ်စစ် ရေနွေး အိုး ပျက်ရင် ပစ်မထားနဲ့အခုလိုပြင်သုံးရင် အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 9
လူသုံးမြားနတေဲ့ ဖျောပွပါ သုံးမိနဈ လြှပျစဈရနှေေးအိုးတှဟော လပိုငျးနဲ့ ပကျြစီး ပွီး စက်ကူ အဟောငျးရောငျးတဲ့ဆိုငျတှမှော အခြိနျဈေးနဲ့ လာရောငျးထားတာအမြားကွီးတှေ.နရေလို့ ပွုပွငျ အသုံးခတြဲ့နညျးကို ရေးပွလိုကျပါတယျ။ အခုလို ပွုပွငျပွီး ကနြျောကိုယျတိုငျ လကျတှေ့ သုံးနတော ၂ နှဈနီးပါရှိနပွေီး ဖွဈတယျ ၊မူလ အသဈထကျ စိတျခစြှာ
အသုံပွုနိုငျတဲ့နညျးပါ။ ရနှေေးအိုး အမြားစု ဟာ power supply. ချေါ လြှပျစဈ ကို အောကျဖကျ အဝိုငျးနရောက ကွှေးပါတယျ ၊ အဲ့ဒီနရော မှာတပျဆငျထားတဲ့ terminal ကွေးပွားလေးတှဟော အလှနျပါးပွီးအသုံးပွု တာ ကွာလာရငျ အပူဒဏျကွောငျ့ ပကျြစီး ကာ ငုတျ နှဈခုမထိ တော့ဘဲ လြှပျစဈဓာတျမစီးနိုငျကာ ရနှေေး
ကြိုမရဖွဈတဲ့ဘဝကိုရောကျရပါတယျ။ အဲသညျတော့ power supply ပေးတဲ့လမျးကွောငျးအသဈထှငျပွီး တပျပေးလိုကျရငျ အကောငျးဖွဈသှားပါတယျ။(အိုးအမြားစုက အောကျဖကျ မီးအဝငျနရောပကျြကွလို့ပါ)၊ပိုပွီးသခြောခွငျရငျ AVO မီတာနဲ့ အောကျဖကျက အပူပေးကှိုငျကို ထောကျတိုငျးလို့ အခကျြပွရငျ ကှိုငျ ကောငျး တာပါဘဲ။
၁.ယိုးဒယား ကလာတဲ့ ဟငျးကွျောအိုး အနီတှမှော သုံးတဲ့ အခံဆော့ကကျဂေါငျး (ကွှခေံဖွဈရပါမယျ)ကို လြှပျစဈဆိုငျတှမှော 500/- နဲ့ ဝယျပါ။
၂.ရနှေေးအိုး အောကျဖကျ screw သုံးလုံးဖွုတျပွီးဖှငျ့ပါ။ အလညျ အဝိုငျးသို့ power supply ပေး သညျ့ ဝါယာစ နှဈစ တှရေ့ပါမညျ ။(အပွာနှငျ့ အနီ) ၊၎င်းငျးအစ နှဈခုအား ဘဲနှုတျသီး ပလာယာဖွငျ့ အသာဖွုတျပါ။
၃.ဝယျလာသညျ့ ဆော့ကကျအထိုငျ မှ ကွှသေား ပါသညျ့အပိုငျးကို ယူပွီး ရနှေေးဘူး၏ အောကျခွတေဖကျခွမျး ဝါယာကွိုး အလှမျးမှီရာ နရောတှငျ နရောခပြါ။(အခွားဘကျတှငျ အခကျြပွ မီး/pilot lamp)ရှိသညျ။
၄. အောကျခွေ အပေါကျဖောကျရာတှငျ ဖောကျစကျ မရှိပါက ဖျောပွထားသလို သံခြှနျ /စကဘော ကို မီးအပူပေးပွီး ရနှေေးဘူးအောကျခံ ကျောသားကို အပေါကျဖောကျ ယူပါ။
၅. ဆော့ကကျအထိုငျ ကွှခေေါငျး တပျဆငျနရောခရြာတှငျ လြှပျစဈ ဝငျမညျ့ငုတျ နှဈခု မထိအောငျ စံနဈတကြ နတျကွပျ ပေးပါ။(တဖကျဖကျကို ရာဘာ ပိုကျသေး စှပျပေးလြှငျ ပိုပွီးစိတျခရြပါသညျ။
၆.၎င်းငျးနောကျ ပထမ ဖွုတျထားခဲ့သညျ့ ဝါယာ ၂ စကို အသဈထိုငျထားသညျ့ ကွှေ ဆော့ကကျတှငျ တပျဆငျပေးပွီး အောကျဘကျမှ screw သုံးလုံးကို စံနဈတကြ ပွနျတပျ ပေးလြှငျ ရနှေေးကွိုနိုငျသညျ့ အိုးအကောငျးတခု ရလာမညျဖွဈပါသညျ။
၇.အသုံးပွု မညျ့ မီးကွိုးမှာ ယိုးဒယား ဟငျးကွျောအိုး အနီ တှငျ အသုံပွုသညျ့ ကွိုးဖွဈပွီး အိမျတှငျ ရှိပါက ထပျမံဝယျယူရနျမလိုအပျပါ။ ဝယျလြှငျ 1500/- ကပျြ ဝနျးကငျြပေးရပါသညျ။ အိုးအထိုငျ အဟောငျး မှ ဝါယာမြားဖွုတျကာ အထိုငျကို ပွနျပွီး အသုံပွုနိုငျပါသညျ။
ဆော့ကကျအထိုငျ မှာ ကွှေ ဖွဈရပါမညျ ။ရနှေေး အိုးမှာ ဝပျ watt-900 ခနျ့ဖွဈလို့ အထိုငျတှကေို့ စံနဈတကြ နတျကွပျ ရပါမညျ။ မထိတထိ ဖွဈပါက လြှပျစဈspark မြားဖွဈကာ အန်တရာယျ ဖွဈနိုငျကွောငျးပါခမြာ။ ရနှေေးအိုး က ဈေးပေါပါတယျ။4500/-ဘဲ ပေးရတာပါ။
ပွငျသုံး ရငျ ၂ နှဈ လှညျ့မကွညျ့ရပါဘူးဗြာ။ “သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 8 (ယမနျနကေ့ ကနြျော ပွုပွငျပေးခဲ့သော အမြိုးတယောကျရဲ့ ရနှေေးအိုး ပါ) ဗဟုသုတ နှငျ့ ငှကေိုခွှတောနိုငျစရေနျ ရေးသားတငျပွသညျ။ “သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 9
Previous PostPrevious တစ်ပြား တစ်ကျပ်မှ မကုန်ဘဲ ပြောင်းဖူးက ထွက်တဲ့ အမွှေးနဲ့ကျောက်ကပ်ရောဂါ ပျောက်နည်း
Next PostNext အကြောသေနေတဲ့ဖခင်ကို အချိန်ပြည့်ဂရုစိုက်နိုင်အောင် တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာ ခေါ်ယူပြုစုပေးနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ အဖြစ်